Iharan’ny fanafihana ny hetsika ho an’ny demaokrasia any Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Iharan'ny fanafihana ny hetsika ho an'ny demaokrasia any Vietnam
Voadika ny 12 Marsa 2019 9:54 GMT
Iharan'ny fanafihan'ny fanjakana indray ny hetsika prô-demaokraty miha-mitombo any Vietnam. Nosamborina ny voalohandohan'ny volana Jolay 2009 ilay bilaogera prô-demaokraty Nguyen Tien Trung. Araka ny tatitry ny Reporters Sans Frontières hoe:
“Nahatonga ny isan'ireo mpanao gazety sy bilaogera notanana tany Vietnam farafahakeliny ho 11 ny fisamborana an'i Nguyen Tien Trung.
Nosamborina tamin'ny 7 Jolay 2009, ora vitsy monja taorian'ny namotsoran'ny tafika azy rehefa tsy nanaiky nanao fianianana i Nguyen Tien Trung, mpikambana mavitrika ao amin'ny Antoko Demaokraty ao Vietnam. Niverina indray ny Antoko Demaokraty ao Vietnam tamin'ny taona 2006, rehefa rava nandritra ny 20 taona. Ilay manamboninahitra nisambotra ilay mpisolovava mpanohitra Le Cong Dinh tamin'ny volana Jona 2009 ihany no nitarika ireo polisy izay naka azy tao an-tranony tao an-tanandehiben'i Ho Chi Minh .
25 taona i Nguyen Tien Trung ary mety ho voampanga araka ny andininy faha-88 amin'ny fehezan-dalàna famaizana ady heloka bevava na dia nanamafy tamin'ny Reporters Sans Frontières aza ny havany sy ny namany fa tsy mbola nandray anjara tamin'ny hetsika anti-Vietnamiana mihitsy izy. “
Tsy i Trung ihany no mpikambana ao amin'ny Antoko Demaokraty nosamborina fa i Tran Anh Kim izay 60 taona ihany koa izay nampangaina ho
“….setting up the Movement of Democratic Youth that aimed to collude with anti-government forces at home and overseas to bring about a ‘change of political regime’ in Vietnam. He was discharged from the army for subordination a day before he was arrested, the newspaper reported.
“… nanangana ny Hetsiky ny Tanora Demaokraty mikendry ny hiara-hiasa amin'ireo hery anti-governemanta ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina mba hitondrana ny ” fanovàna ny fitondrana politika “any Vietnam. Noroahana tao amin'ny tafika izy noho ny baiko midina andro iray talohan'ny nisamborana azy, hoy tatitry ny gazety.
Nilaza ny polisy fa nanoratra bilaogy i Trung, nizara taratasy maromaro, nitarika ny ‘Sehatra Fifanakalozan-kevitra ho an'ny Tanoran'ny Demaokrasia’ tao amin'ny aterineto ary nanao lahateny tany am-pivoriana mba handrisihana ny olona hanohitra ny governemanta.”
Tsy vao voalohany ny nanaovana lasibatra an'i Nguyen noho ny fikatrohany tamin'ny fisamborana azy. Nitarika ny IBM hanafoana ny tolotr'asa nataony ny famoretana nataon'ny governemanta Vietnamiana tamin'ny fikatrohan'i Trung. Nilaza ny lahatsoratra tamin'ny taona 2007 nosoratan'ny Komity Mpiaro ny Bilaogera fa nisoroka ny hetsika efa voaomana ny teknolojia goavam-be taorian'ny nandrenesany ny fikatrohan'i Trun ara-pahalalaham-pitenenana tao an-tanindrazany.
Miroborobo ny hetsika prô-demaokrasia sy ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera na dia teo aza ny hetsika henjana avy amin'ny governemanta. Hoy i Matt Steinglass tao amin'ny Boston Globe hoe,
“Narehitry ny taranaka tanora izay tarafin'ny hevitra politika vaovao amin'ny alalan'ny fianarana any ivelany ary indrindra indrindra amin'ny alalan'ny aterineto ny hetsika fikatrohana fisintahan-kevitra vao haingana.
Mihamaro ny bilaogy any Vietnam nandritra ny taona, na dia tsy miraika amin'ny politika aza ny ankamaroany. Tsy afa-mikofoka ny Bloc 8406 raha tsy misy ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera sy ny rindrambaiko fampitana feo amin'ny aterineto, izay ampiasain'ny mpikambana hifandraisana mba hisorohana ny mety ho fitsikilovan'ny mpitandro filaminana.
…… .. Mandràra ny fampiasana ny aterineto hitsikerana ny governemanta na hanohintohinana ny filaminam-bahoaka ny lalàna Vietnamiana. Mikasa ny hanakana ny tranonkala politika ny rindrina aro afo nasionaly, saingy mbola maro no mahavita miala amin'izany. “
Tao amin'ny YouTube, namoaka lahatsary maromaro ireo bilaogera nampiseho ny hetsika prô-demaokraty ao Vietnam ary amin'ny teny Vietnamiana ny ankamaroany. Ity misy lahatsary iray mampiseho ireo mpanohitra nosamborin'ny governemanta noho fiarovana ny fahalalahana miteny.
Manana vondrona maro natokana hampiroboroboana ny hetsiky ny fahafahana any Vietnam ny Facebook. Iray amin'ireo lehibe indrindra amin'izany ny Democracy for Vietnam ahitana mpikambana miisa 3.400 eo ho eo.